Blog -ka karinta iyo cuntooyin macaan
С Dibedda u bax
Kale oo waxtar leh
Waa kuwee maaddooyinka dubista qoyan ka dhiga?
Category: С Dibedda u bax 0
Daqiiqdu waa maaddooyinka ugu muhiimsan ee loo isticmaalo dubista. Gaabinta waxay ka dhigtaa alaabta la dubay qoyaan, waxay ku daraysaa dhadhan, waxayna ka dhigtaa shayga la dubay mid cusub. Baruur kasta, sida saliid ama…
Intee in le'eg ayaan u oggolaanayaa in shiil cusub gubto?
Kahor intaadan isticmaalin dubka, waxaad u baahan doontaa inaad shiddo oo aad u oggolaato inuu gubto 20 illaa 30 daqiiqo. Gubashadan ugu horreysa ayaa nadiifisa shiishadda, oo ka saarta wixii…
Intee in le'eg ayay qaadataa in la kariyo 1 kg oo Gammon ah?
Wakhtiga karinta ayaa ku kala duwanaan doona baahida miisaanka hilibkaaga. Si loo xisaabiyo waqtiga karinta ee gammonka miisaama wadajirka. Wadajir gammon oo aan laf lahayn ayaa…
Su'aashaada: Intee in le'eg ayaad ku karsanaysaa digaag 400 digrii?
Intee in le'eg ayaan ku karsan karaa 400 digrii? Si aad Naaska Digaagga ugu dubto 400 ° F: Tani waxay qaadan doontaa inta u dhexeysa 22 iyo 26 daqiiqo iyadoo ku xiran baaxadda…
Su'aal: Maxaa dhacaya marka aad shiisho spaghetti?
Maxaa dhacaya haddii aad shiisho spaghetti? Maxaa dhacaya haddii aad shiisho baasto ceeriin ah? Isbinaajka digsiga la kariyey ama hadhaaga ayaa sababa in baastada ay isku dhegto, oo ay ka dhalato…
Maxaan u isticmaali karaa si aan u nadiifiyo banaanka weelkayga Weber?
Maxaan u isticmaali karaa si aan u nadiifiyo dabka dubkayga dibadda? Isticmaal isbuunyo si aad ugu xoqdo dhinaca dabkaaga saabuun iyo biyo. Haddii…
Intee in le'eg ayaad karsanaysaa aargoosad barafaysan?
Intee in le'eg ayaa la kariyaa aargoosad barafaysan oo dhan? Dabool dheriga, oo, hadday dhan tahay, u oggolow inay u uumiyaan 10 daqiiqo oo ah 1-pound lobster ama 7-8 daqiiqo halkii…
Ma jiraan cuntooyin shiilan oo caafimaad qaba?
Marka si dhexdhexaad ah loo cuno, cuntooyinka shiilan xaqiiqdii waxay qayb ka noqon karaan cunto dheelitiran. Marka, haddii aad la yaabban tahay 'cuntada la shiilay caafimaad ma yeelan kartaa? ', jawaabtu waa…
Saliid noocee ah ayaad ku shiishaa digaagga?
Dooro saliidaha leh meel qiiqa sare leh: khudaarta oo soo gaabinaysa, subag, iyo saliidda lawsku waa xulashooyin wanaagsan oo dhan. Baruurtu waa inay ahaataa qiyaastii hal inji oo qoto dheer skillet -ka,…
Sideen u noqon karaa cunto kariyaha ugu fiican?
Waa maxay xirfadaha ay u baahan yihiin cunto kariyeyaashu? Waa kuwan tusaalayaal xirfado ah oo ay tahay inaad yeelato ama aad ku hormariso sida cunto -kariye: Ballan -qaadka tayada. Cunto karinta waa in…
Salaan! Magacaygu waa Kate waana jeclahay inaan karsado. Waxaan la wadaagayaa akhristayaasheyda cuntooyinka macaan iyo khayaanada nolosha ee xiisaha leh ee adduunka kariska.
Sideed ku ogaatay in beerka digaagga la kariyo?
Intee in le'eg ayaad si qoto dheer u shiishaa burcad jiiska barafaysan?
Maxaad samaynaysaa marka amarka kasoobaxa la qaado?
Ma karin kartaa hilibka markuu barafoobay?
Maxaa dhacaya marka aan karkariyo cuntada?
Maxaan ku kariyaa candhuuf?
Su'aal soo noqnoqota: Ma waxaad shiishaa baalal barafoobay ama dhalaalay?
© 2021 Aynu wax cunno?
DHAGEYSO DADKA XAQA! Dhammaan agabyada ayaa si adag loogu dhajiyay goobta si loogu talagalay ujeeddooyin macluumaad iyo waxbarasho! Haddii aad u malaynayso in dhajinta wax kasta oo ku xad gudba xuquuqdaada, hubso inaad nagala soo xiriirto foomka xiriirka iyo maaddadaada ayaa laga saari doonaa!